Inona no atao hoe dokam-barotra fampirantiana mivantana? | Martech Zone
Alahady Oktobra 18, 2015 Zoma, Desambra 1, 2017 Douglas Karr
Nozarainay izay dokambarotra fandaharana dia ary nadinadinina ny mpitantana ny varotra vokatra ambony an'i Adobe ho an'ny Advertising Solutions, Pete Kluge. Ary efa nohazavainay tolotra tena izy, ny dingana ampiasain'ny rafitra fandaharana mba hahazoana toerana malalaka amin'ny alàlan'ny tamba-jotra dokambarotra.
Ny fanisana dokam-barotra dia tsy misy amin'ny tambajotran-doka fotsiny. Misy sehatra maromaro ihany koa ahafahan'ny mpanao dokam-barotra mividy doka mivantana amin'ny tranokalanay. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny sehatry ny dokam-barotra sy ny tamba-jotra doka dia ny tsy fananantsika endri-panolorana fotoana tena izy izay ahafahan'ny rafitra mifampiraharaha vidiny isaky ny kitiho. Fa kosa, hanana taha efa voafaritra mialoha izahay, hanaiky izany ihany koa ny mpanjifa.
Inona ny dikan'izany? Eny, ny angona avy amin'ity infographic avy amin'ny AdReady ity dia mampiseho fa ny tolotra amin'ny fotoana tena izy dia miteraka vidiny ambany 76%. Na izany aza, tsy voatery midika izany fa fotoana tsara kokoa. Ny doka mivantana dia mety hitarika ho amin'ny taha ambony kokoa noho ny fametrahana premium - amin'ny farany manome fampielezan-kevitra mahomby kokoa.
Ity infographic manaraka ity dia mamakivaky anao amin'ny fomba ahafahanao mampiasa ny rafitry ny dokambarotra fandaharana amin'ny alàlan'ny fanolorana fotoana tena hanatsarana ny dokam-barotra fampisehoana mivantana ataonao.
Tags: dokambarotra fandaharanaProgrammatic DirectFandaharana mivantana momba ny fandaharanaFampisehoana mivantana amin'ny programaFampirantiana mivantana amin'ny fandaharana